Opinions & Discussion » Go Go .. … ဘွားဒေါ် Gold	22
သံချောင်း says: အလို..
kai says: ခင်ဗျားတို့ရွာက ကိုရင့်ရွာလည်းဖြစ်ပါသည်…. တမုံ့..။
သုဘရာဇာ သံချောင်း says: အလို!
ကျုပ်​က မူလအစပထမသံ​ချောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
သံလုံး says: မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျား
သုဘရာဇာ သံချောင်း says: အရက်​ပုလင်းဘယ်​မှာကျန်​ခဲ့လဲ
ကျုပ်​ကိုဘီအီးတိုက်​ပါ ဒါဗြဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
သံပြား says: ကိုသံလုံးနဲ့ ကိုသံချောင်းတို့
ဦးကျောက်ခဲ says: ဘွားတော်ခြေလှမ်းကို သူ့လူတွေ မမီမှာပဲ စိုးရိမ်၏…
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: အူး သန်းရွှေ သမ္မတလုပ်မယ်ကြားတယ် ….
Alinsett @ Maung Thura says: ဟိုနေ့က အမေ…ပြောလိုက်တဲ့ ခပ်တင်းတင်းခပ်မာမာ စကားတွေကြောင့်
kai says: ပေးထားတဲ့… အကျန်…အဲ… အဲ.. အကြံတွေ…။
သမ္မတဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်… ကျန်းမာပါစေ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: မေမေမှန်တယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: အမေ့လုပ်ရပ်တွေကို
သံချောင်း says: မဂိုးဘူး မဂိုးဘူး
Mike says: .Go Go….Gold
သံလုံး says: ဂိုးဘူး ဂိုးဘူး
Mike says: .လုံးလိုက် ပြားလိုက် ချောင်းလိုက်နဲ့ မျက်စေ့နောက်လှသကွာ..ဘီအီးပုလင်းသာပြန်ယူချီပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: Gold Gold Gold
kai says: ပြောသာပြောတာ…
ဦးကြောင်ကြီး says: ပြောချဉ်နေတာ ကြာပီ အူးမာမွတ်…. ဒေါ်စု နိုင်ငံခြားထွက်တော့ လမ်းလျောက်တာ ပိုမြင်ရတယ်။ ကိုယ်ကို နွှဲ့ပီးလျောက်တာ သိသာတယ် အကျင့်ဖြစ်နေတယ် ထင်လျဲ့
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒီတစ်ပတ်ထုတ် ဒီလှိုင်းမှာ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကို ဖတ်ရချိန်.. အသက်တောင် ပြင်းပြင်းမရှူနိုင်ခဲ့ဘူး…
Mike says: .ဒေါ်စုမိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံတင်ပေးဂျပါဗျို့…ဒီလှိုင်းလည်းဝယ်မရလိုက်ဘူး
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဘာပဲ​ပြော​ပြော ပြည်​သူ​တွေက ​ဒေါ်စုအုပ်​ချုပ်​တာခံရဖို့ ​တောင့်​တ​နေတာ ကာလအ​တော်​ကြာပြီမို့လားမသ်ိ။ ​ဒေါ်စုက တစ်​ခုခုလုပ်​ပြရင်​ ​နောက်​က သ​သွေမတိမ်းလိုက်​လုပ်​ကြမယ့်​သ​ဘောမှာရှိတယ်​။စည်းကမ်းမဲ့တာ​တွေ ခဏ​လေးနဲ့​လျော့ကျသွားမှာ မလွဲ​သေချာ။